202 arday oo ka qalinjabisay Jaamacadda PSU - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntland202 arday oo ka qalinjabisay Jaamacadda PSU
April 3, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ardaydaka ka qalinjabisay jaamacadda. [Xigashada Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) 202 arday oo kala kala socda kulliyado kala duwan ayaa maanta oo Arbaco ka qalinjabisay Jaamacadda Puntland State Univeristy (PSU).
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed oo loo yaqaan Dhoobo-daareed iyo masuuliyiin kale oo katirsan dowladda ayaa ka qeybgalay munaasabada qalinjabinta oo lagu qabtay magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo hadal ka jeediyay munaasabada ayaa u hambalyeeyay ardayda qalinjabisay, waxaana uu ku dhiirigeliyey inay dalkooda aaminaan, ka shaqaystaan, dadkooda ugu faa’iideeyaan aqoonta ay barteen, waxaana shacabka reer Puntland uu u jeediyay inay xoogga saaraan aqoonta qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan midda sare.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo hadal ka jeedinaya xaflada qalanjabinta ardayda PSU. [Xigashada Sawirka: Puntland State House]
Waxay ahayd dufcadii 12-aad ee ka qalinjabisa jaamacadda PSU tan iyo markii la asaasay, sida ay sheegeen masuuliyiinta jaamacadda.
Garowe-(Puntland Mirror) Somalia’s Puntland government has announced that it is preparing to retake Qandala coastal town from ISIS militants, Qandala’s mayor said. “We and our forces left Bosaso today with the intention to capture to [...]
Jowhar-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle ayaa doortay madaxweynahoodii ugu horeeyay. Tilaabadaan ayaa imaanaysa labo asbuuc kadib markii la asaasay maamulkaas. Doorasho lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baarlamaanka maamul goboleedka [...]